Blog Action Day Androany: Andeha Hiresaka Momba Ny Tsy Fitoviana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2014 19:07 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Aymara, عربي, English
Blog Action Day androany– miaraka amin'ny penina, fafana ary ny kitendry isika amin'ity taona ity mba hiresaka momba ny tsy fitoviana na ny fahasamihafana (inégalité).
Mandraisa anjara ary amin'ny #Blogaction14 amin'ny alalan'ny fisoratana ny bilaoginao manokana eto. Soraty amin'izay fiteny mety aminao, na aiza na aiza firenena misy anao. Tsarovy ihany koa fa manana famaritana midadasika ny bilaogy: tafiditra avokoa ny Vlogs(lahatsarylog), podcasts (fandraisam-peo), sary, famoronana sy ny habaka media sosialy. Araho ny ao amin'ny Twitter amin'ny diezy #Blogaction14, #Inequality sy#Oct16.
Mbola mpiara-miasa ofisialy amin'ity hetsika Blog Action Day ity indray ny Global Voices, ary nandray anjara tao amin'ny bilaoginy manokana ny sasany tamin'ireo mpikambana lehibe ato amintsika. Jereo ny lahatsoratr'izy ireo eto ambany:
The woes of inequality (Ny fahorian'ny tsy fitoviana) nosoratan'i Sanjib Chaudhary
Bildungsungleichheit durch Homogenisierung (Tsy fitoviana amin'ny Fampianarana avy amin'ny Fampitoviana (homogenization), amin'ny teny Alemana) nosoratan'i Katrin Zinoun
Desigualdad (en Latinoamérica) (Tsy fitoviana ao Amerika Latina, amin'ny teny Espaniola) nosoratan'i Juan Arellano
#BlogActionDay Desigualdad (#BlogActionDay Tsy fitoviana, amin'ny teny Espaniola) nosoratan'i Juan Tadeo